Ajụjụ 4 Jụọ Onye Nleta Weebụsaịtị gị | Martech Zone
Avinash Kaushik na-bụ Google Analytics Onye nkwusa ozioma. Ga-ahụ ya blog, Occam's Razor, bụ nchịkọta weebụ pụtara ìhè ihe enyemaka. Enweghi ike itinye vidiyo ahụ, mana ị nwere ike pịa na onyonyo a:
Avinash na-emetụ aka na nghọta dị egwu, gụnyere nyocha ihe na-abụghị na weebụsaịtị gị nke kwesịrị. Avinash kwuru ihe omimi, ụlọ ọrụ na-enyere ụlọ ọrụ aka ịghọta afọ ojuju ndị ahịa. Ha na-aju ajuju 4:
Onye na-abịa na weebụsaịtị gị?
Gịnị mere ha ji nọrọ ebe ahụ?
Kedu ka ị na-eme?
Kedu ihe ị chọrọ idozi?
Ajụjụ anọ a nwere ike ịme ka mmụba dị ukwuu na saịtị gị yana nsonaazụ azụmaahịa ọ na-ebugharị. Yoù ma azịza ajụjụ ndị a? Ọ bụrụ na ọ bụghị, olee otu ị si eme atụmatụ na ibute mgbanwe ndị na-abịa abịa ụzọ?
Njirimara Kachasị Mma nke Weebụ?
Ihe mmịfe a dọtara uche m karịa ihe ọ bụla n'ihi ahụmịhe m dịka Onye njikwa ngwaahịa na mmekọrịta arịrịọ ime na nke mpụga maka atụmatụ ngwaahịa.
Mụta imehie ihe. Ngwa ngwa.
N'aka ozo, echela ihe aga etinye na saiti gi (ma obu ngwa ahia gi) ma ghara ikwe ka o rute komiti. Tinye ya na mmepụta ma lelee nsonaazụ ya! Ka nsonaazụ ya bụrụ ihe ntụzi etu saịtị gị ma ọ bụ ngwaahịa gị si mepụta.
Ikiri vidiyo ahụ ga-enye ụfọdụ nghọta banyere ike nke nchịkọta! Jide n'aka na ị na-ewepụta oge ma na-ekiri vidiyo ahụ, ọ ga-eme ka ị chee echiche banyere otu ị ga-esi nyochaa ngwugwu ọ bụla ị nwere ma nweta arụmọrụ ka mma site na weebụsaịtị gị.
Gịnị bụ Occam's Aguba?
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe Occam's Razor bụ na ihe ọ nwere ike ime na nchịkọta:
Obuba Occam (nke a na-asụ agụba Ockham mgbe ụfọdụ) bụ ụkpụrụ e nyere na dibịa Bekee na narị afọ nke 14 na Francis friar, William nke Ockham. Principlekpụrụ ahụ na-ekwu na nkọwa nke ihe ọ bụla kwesịrị ime ka echiche ole na ole dị ka o kwere mee, na-ewepụ ndị na-enweghị ihe dị iche na amụma ndị a na-ahụ anya nke nkwupụta ma ọ bụ tiori nkọwa.
Okpu okpu ka Mitch Joel na Pixels isii nke Nkewa maka ịchọta.
Tags: akwụkwọ akaBW 12ComputerỌrịa Ọrịa Computerụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummiesocheihena-akwadomobile tinye-na-cart udumobile ọnụego mgbanweỌpụpụụgwọ ọrụIhuenyoọchụchọ benchmarksnzukọ ọmụmụihe omume ọchụchọelekọta mmadụ ibe edokọbaranzukọ mgbasa ozi mmekọrịtaihe omume mgbasa oziWere ezumikezukọta